इजरायल रोजगारीका लागि फाराम भर्न समस्या भयो ? यहाँ छ सजिलो तरिका - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeथपइजरायल रोजगारीका लागि फाराम भर्न समस्या भयो ? यहाँ छ सजिलो तरिका
इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा काम गर्न इच्छुक महिला र पुरुष दुवैले आवेदन दिन पाउँछन् । सरकारी तवरबाटै जाने कामदारको मासिक न्यूनतम तलब १६ सय डलर अर्थात् लगभग एक लाख ९० हजार रुपैयाँ हुन्छ । कामदारले लागत शुल्क भने एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ ।***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
Previous articleकर्णालीमा पुल बनाउने गुमनाम पात्र : जसको मृत्युको कारण ४८ वर्षसम्म रहस्यमै